Na Akụkọ - Popular Jewelry
Na The News
Dị Ka Hụrụ:
Chọrọ ka n'ime ahụ dị na otu n'ime ndị na-eduga jewelers na ụlọ ọrụ? Nwere mmasị etu esi eme ọla edo na / ma ọ bụ grillz? Nwere mmasị na nhụchaanya nke ọrụ klaasị ụwa anyị? Nwere akụkọ ịchọrọ ikpuchi ma ọ bụ ịchọrọ itinye anyị aka na ọrụ mgbasa ozi gị? Alala azụ ịkpọtụrụ anyị na info@popular.jewelry maka ajụjụ mgbasa ozi.
Ndepụta dị mkpirikpi nke njikọ nke mgbasa ozi na mbipụta anyị gosipụtara ma ọ bụ pụta na:
Isiokwu / Bipụta
Akwụkwọ edemede / Ajụjụ ọnụ
Ihe Nkiri / Egwu Egwu
Pọdkastị / Redio
SinoVision - Ebe Rap Ama ama nke ọla di na Chinatown